अन्डा शाकाहारी कि मांशहारी ? विज्ञान भन्छ, अन्डा मांशहारी भए दुध पनि मांशहारी हो ? - Himali Patrika
अन्डा शाकाहारी कि मांशहारी ? विज्ञान भन्छ, अन्डा मांशहारी भए दुध पनि मांशहारी हो ?
हिमाली पत्रिका ३० साउन २०७८, 8:25 pm
कुखुरी पहिले जन्म्यो कि अन्डा ? यो प्रश्न अहिलेसम्म अनुत्तरित नै छ । अब अर्को प्रश्न थपिएको छ, अन्डा शाकाहारी कि मांशहारी ?
हामी यस प्रश्नमा धेरै अलमलिन्छौ । किनभने यो आफैमा मासु जन्य होइन । वा मासु जस्तै कुनै सग्लो शरीर काटकुट गरिएको होइन । तर, यसको स्रोत भनेको कुखुरी नै हो । साथसाथै अन्डा, जसबाट चल्ला पैदा हुन्छ ।
अन्डा चल्लाको स्रोत मात्र होइन । मिठो खान्की पनि हो । अन्डाको थरीथरी परिकार बन्छ । मासु नखानेहरुले समेत अन्डा खाने गरेको पाइन्छ ।
कतिले भने यसलाई मांशहारीकै कोटीमा राख्ने गर्छन् । त्यही कारण उनीहरु मासु जस्तै अन्डा पनि खाँदैनन् । उनीहरुको तर्क हुन्छ कि, अन्डा भनेको कुखुराले दिने हो । यसले गर्दा यो ननभेज हो । तर, यस्तै तर्क गर्ने हो भने, दुधलाई पनि त ननभेज भन्नुपर्ने । किनभने यो पनि जनवारले दिने हो ।
अब तपाई भन्नुहुन्छ कि, अन्डाबाट बच्चा पैदा हुन्छ । तर, बजारमा पाइने अन्डा अनफर्टिलाइज्ड हो । अर्थात त्यसबाट कहिलेपनि चल्ला पैदा हुँदैन । हुनै सक्दैन ।
यो विवादलाई विज्ञानले सफाइ दिएको छ । विज्ञानले भन्छ, अन्डा शाकाहारी हो । रिसर्च अनुसार अन्डाको सेतो भागमा केवल प्रोटिन हुन्छ । त्यसमा मासुको कुनै अंश हुँदैन ।
अक्सर हामी खानेकुरा ताजा राख्न फ्रिजको प्रयोग गर्छौं । अन्डा पनि फ्रिजमा राख्छौं । तर, अन्डालाई फ्रिजमा राख्नु उपयुक्त हुँदैन । फ्रिजमा अन्डा स्टोरेज गर्दा फाइदा होइन, नोक्सानी हुन्छ ।
यदि तपाईं पि|mजमा अन्डा राख्नुहुन्छ र पछि त्यसको प्रयोग गर्नुहुन्छ भने त्यसलाई फिट्न अपेक्षाकृत मुस्किल हुन्छ । जसले गर्दा रंग र स्वादमा फरक पर्छ । यसले तपाईंको स्वास्थ्यलाई फाइदा होइन, नोक्सानी पुर्‍याउँछ ।